Ego ole ka ị ga -enye ndụmọdụ maka nnyefe nri: ntuziaka kachasị - Omenala
Nke a bụ Kachasị Ihe ị ga -enye ndụmọdụ maka ọkwọ ụgbọ nnyefe nri gị
Ị maara na ịpịcha mkpụrụ bụ ihe dị mkpa, mana ego ole a ga -enye, onye kwesịrị inweta otu, yana ebe ego ahụ na -aga ka bụ ihe omimi. N'ime Ọmarịcha Ntuziaka maka ịtụgharị, anyị na -agbagha ọgba aghara ahụ.
Anyị niile maara ego ole ị kwesịrị ịtinye ihe nkesa n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ - pasent 18 ruo 20. Mana enwere obere idoanya maka ego ole a ga -enye maka nnyefe nri. N'ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ndị na -eche nche na -ewetara gị nri gị, na -enyekarị ihe njakịrị mara mma, ma nwee ike ịgwa gị ụdị ngwakọta ọcha ga -akacha mma na mma agha gị. Mana kedu maka ndị nwere ọrụ ibute nri n'ọnụ ụzọ gị mgbe ị banyere? Dị ka ọkwọ ụgbọ ala Grubhub ma ọ bụ enweghị nsogbu?
N'ihi ọrịa na -efe efe, ntụkwasị obi anyị na ndị ọkwọ ụgbọala na -ebubata nri arịgoro elu. Mgbe DoorDash gbara akwụkwọ maka IPO n'ọnwa gara aga, ụlọ ọrụ ahụ kọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri dollar abụọ n'ime ego n'ime ọnwa itoolu. Ọ bụghị ihe ijuanya mgbe ọtụtụ mba na -akpọchi akpọchi, ịnagide (ebe ọ na -akwadokwa ụlọ oriri na ọ localụ localụ obodo na -eche mmechi) bịara n'ụdị iwepụ.
Ọ bụ ezie na ha nwere ike ghara mejupụta iko mmiri gị n'oge nri gị, ha ka nọ ebe ahụ oge niile iji wetara gị bagel n'oké mmiri ozuzo ma ọ bụ mmanya maka oriri iche iche gị.
Ya mere iwu ụlọ oriri na ọ stillụ stillụ ka na -emetụta mgbe a na -ebute nri gị n'ọnụ ụzọ gị, ọ bụghị tebụl? Kpomkwem. Ọmarịcha soro ndị ọkwọ ụgbọ ala Grubhub gafee mba ahụ maka ndụmọdụ ha. Gụọnụ maka ndụmọdụ ndụmọdụ ị nweta nnyefe kacha mma.
Ego ole ka ndị ọkwọ ụgbọ ala nnyefe Grubhub na -enweta
N'adịghị ka ndị na -eche nche, ọtụtụ n'ime ndị ọrụ nnyefe a anaghị akwụ ụgwọ ụlọ nri. Grubhub na -akwụ ha ụgwọ - ọ dabereghị nha ma ọ bụ ọnụahịa nke ịtụ. Grubhub nwere ntọala $ 3.50 [dabere na ọnọdụ], gbakwunyere kilomita, ego ọ bụla ha na -enye, yana ndụmọdụ, ka Curtis na -ekwu, onye na -enye Grubhub na Denver kwuru. Ọ bụ ezie na ụgwọ ego nwere ike ịdị iche dabere na obodo ma ọ bụ steeti ị na -abanye, onye ọkwọ ụgbọ ala na -amaghị aha na Rochester, New York, kesara na a na -akwụ ya cents 50 na mile. Mana ọ dị mkpa ịmara, ọ na -ekwu, na a naghị akwụ anyị ụgwọ site na ebe anyị nọ n'ụlọ nri. A na -akwụ anyị ụgwọ naanị site na ebe anyị na -eri nri abalị, yabụ anyị nwere ike ịnya ụgbọ ala ruo nkeji iri abụọ mgbe ụfọdụ iji bulie nri anyị anaghị akwụ ụgwọ.
Ma olee otu ndụmọdụ ihe kpatara ya? N'ihi na Grubhub na -enye ndụmọdụ maka algorithm ịkwụ ụgwọ ha, ọ dị mkpa otutu. Maka John William, onye ọkwọ ụgbọ ala na Pennsylvania, ihe dị ka pasent 50 nke ego m na -enweta kwa izu sitere na ndụmọdụ m. Yabụ mgbe ị na -enye ndụmọdụ ọkwọ ụgbọ ala nnyefe gị, cheta na ọ bụ nnukwu akụkụ nke ụgwọ ọnwa ha.
Ha nwere ụgwọ ị gaghị eche
Ndị ọkwọ ụgbọ ala Grubhub anaghị eji ego ha na -enweta na -apụ. Dị ka ndị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-ekerịta ihe, ọtụtụ ọrụ ọkwọ ụgbọ ala Grubhub na-arụ n'ime ụgbọ ala nke ha. Yabụ akụkụ nke ụgwọ ọnwa ha na -alaghachi na gas na mmezi nke ụgbọ ala ha. Curtis na Denver na -eme atụmatụ na ọ na -etinye pasent 12 nke ụgwọ ọnwa ya n'ime ụgbọ ala ya n'ihe ndị dị ka taya ọhụrụ, mgbanwe mmanụ - nke nwere ike iru ihe ruru $ 25 - ma ọ bụ na -achọ ka emezigharị breeki m. Nke ahụ enweghị gas, nke nwere ike na -eri ihe ruru $ 50 kwa izu, dabere n'ụgbọ ala.
Ihe kpatara o ji enye ndụmọdụ
Ihe ị nwere ike ịmaghị maka Grubhub bụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike hụ n'ezie ka ị na -atụ - tupu ha na -anabata arịrịọ nnyefe gị. Ọ bụrụ na ị na -atụgharị ihe dị ka cents 10 ma ọ bụ 40, enwere ndị ọkwọ ụgbọ ala ga -emepe iwu ahụ, hụ ya, jụ ya, Curtis kwuru. A ga -enyefe ya onye ọkwọ ụgbọ ala ọzọ ruo mgbe mmadụ dị njikere inye ya. Ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ga -ama ụma jide iwu ahụ tupu ha ekenye ya ọzọ. Onye ọkwọ ụgbọ ala Rochester anụwo akụkọ ndị yiri ya. Enwetala m iwu nke gafeworo otu elekere n'ihi na ha agabigala ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na -achọghị iburu ya n'ihi na ọ baghị uru. Ma ọ bụ kagbuo iwu a, ka ọ kọwara. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ nri gị tupu oyi ajụ oyi, tụọ aka n'ụba.
Maka imirikiti iwu, mgbe a bịara n'ịtụ ego maka nnyefe nri, ị kwesịrị ịgbakwunye opekata mpe pasent 20 na ngụkọta taabụ. Curtis na -adụ ọdụ, Ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu iwu, m ga -aga ebe dị ka Steakhouse Outback wee buru nri ruru $ 100, pasent 20 ga -adị mma. Mana ọtụtụ iwu ọ na-enye sitere na ebe nri ngwa ngwa, yana ọnụ ahịa dị ọnụ ala. 'Pasent iri abụọ na nnyefe Taco Bell ga -erughị $ 2, yabụ maka obere iwu, ihe ruru $ 3 ma ọ bụ otu a ga -abụ ihe m ga -atụ anya ya.' Ọzọkwa, ọ bụrụ na ibi n'obodo ukwu, ọ bụghị ndị nnyefe niile na -anya ụgbọ ala - ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ije. Yabụ ọ bụrụ ihu igwe jọrọ njọ ma ọ bụ iwu gị dị anya ị ga -ebuga, ị kwesịrị ịtụle n'ezie inye ihe karịrị pasent 20, ọkachasị n'oge ọrịa.
Ọ dị mma ịmara na ọtụtụ ngwa etinyerela pasentị iri na ise ka ọ bụrụ ego nrụnye ndabara, yabụ na -agakarị n'elu. Ịdịkwu mma maka gị kwesịrị ịpụtakwuru ha ndụmọdụ.
Ihe ọzọ ị ga -eburu n'uche bụ na ọ bụrụ na ị ga -akwụnye ego - nke a na -anabata nke ọma - gbaa mbọ dee ya na ndetu. '' Ndị ọrụ Grubhub] chere na ha nwere ike inye ego, mana ọ bụrụ na agwaghị anyị wee hụ na anyị enwetaghị ọnụ, anyị agaghị eme iwu ahụ, '' onye ọkwọ ụgbọ ala Rochester kwuru.
Naanị n'ihi na ha anaghị echere gị ruo oge nri a apụtaghị na ha anaghị arụ ọrụ yiri nke a, yabụ tụọ ha aka dịka ị ga -eme onye oriri ọ bụla ọzọ - ha kwesịrị ya.
Akụkọ a bụ akụkụ nke ntuziaka Glamour maka ịtụ aka. Ndụmọdụ dị ntakịrị ma dabere na ihe dị iche iche. Mụtakwuo maka ego ole ị ga -enye usoro asaa a.
ugboro ole nke netker stalker abalị
ogologo oge ole ka ntutu ntutu na -adịru
ntutu isi nwanyị na -ala azụ na 20
ipl tupu na mgbe ọgwụgwọ 3 gasịrị
otu esi enye onwe gị aka aka